Fayraska Corona: Taxaddarka iyo yaraynta cudur-faafka - Stockholms stad
Fayraska Corona: Taxaddarka iyo yaraynta cudur-faafka
Degmada Stockholm waxay si feejigan ula socotaa xaaladda fayraska Corona iyo tusaalooyinka Hay’adda Ilaalinta Caafimaadka Dadweynaha. Degmada xannaanadaheeda carruurta weli waa ay furan yihiin.
Dawladdu waxay soo saartay qaraar cusub oo suurogelinaya in tallaabooyin kala duwan la qaado marka loo baahdo in iskuullada loo xiro fayraska Corona iyo cudurka covid-19. Degmada Stockholm si feejigan ayey ula socotaa xaaladda si haddii loo baahdo ay degdeg u gaarto go’aan kale.
Goorma ayuu ilmaheygu guriga joogi doonaa?
Waxaynu u baahan nahay inaynu wadajir mas'uuliyad u qaadno si faafitaanka fayruska loogu yareeyo. Waxay magaalada Stockholm raaceysaa talobixinta dawlaad waxayna kuu soo jeedinaysa inaad Folkhälsomyndigheten iyo Region Stockholm kala socoto wixii macluumaad jira/hadda taagan. Waxay Taasi khuseysaa xanaanooyinka caruurta (förskolor) iyo waliba daryeelka waxbarashada (pedagogisk omsorg) iyo dugsiyada xanaanada furan (öppna förskolor).
Haddii calaamado jiraan
Waa inuu ilmahaagu guriga joogaa haddii uu xanuunsanaayo ama haddii uu jiro qof qoyskiina ka tirsan oo leh calaamado laga yaabo inay noqon karaan covid-19. Tasi waa sida waafaqsan tilmaamaha cusub ee gobolka Region Stockholm. Calaamadaha uu covid-19 caadi ahaan leeyehay waa sida duuf, qandho iyo qufac.
Fortsätt följa råden för att minska smittspridning, Vårdguiden 1177
Haddii ilmahaagu calaamadu ku muujiyo dugsiga xanaanada dhexdiisa
Haddii ilmahaagu calaamadu ku muujiyo dugsiga xanaanada dhexdiisa, xitaa haddii kuwaasi ay khafiifka yihiin, ayuu dugsiga xannaanadu kula soo xiriiri doonaa si aad ilmahaaga guriga ugu kaxeyso.
Naftaada iyo ta dadka kaleba ka ilaali faafitaanka fayruska, bogga internedka ee Folkhälsomyndigheten
Haddii la xaqiiiyo inaad covid-19 qabto
Qof kasta oo qoyskiina ka mid ahi waa inuu guriga hal todobaad joog haddii la xaqiijiyo in qof ka tirsan qoyska uu covid-19 qabo.
Haddii adiga ama qof qoyska ka mid ahi uu xanuunsaday, bogga internetka ee Folkhälsomyndigheten
Haddii aad infegshanka ka walwalsan tahay?
Haddii adigu masuulka ahi aad ka walwalsan tahay oo aad rabto inuu ilmahaagu guriga joogo iyadoo taas ay sabab u yahay fayruska Korona, waa inaad sida caadada aheyd fasax dalbataa, sida waafaqsan nidaamka waxqabdka ee dugsiga xanaanada ka jira.
Af dhowre/af gashi ayaan dugsiga xanaanada ku qasab ahayn
Waxa uu Region Stockholm soo jeedinayaa in bulshadu isticmaasho af dhore/af gashiga halka mar la xirto marka lagu jiro xaaladaha gudaha guriga ah ee aan laga fogaan karin xiriirka dadka kale. Talobixintan ma khusayso dugsiga xanaanada. Waxa af dhowre/af gashi dugsiga xanaanada dhexdiisa la soo jeedinayaa kaliya xaaladaha gaarka ah ee dadka waaweyn haddii aanay masaafad u jirsan karin muddo dheer. Isticmaalka guud ee af dhowre/af gashi waxa looma soo jeedinaayo bey'ada dugsiga xanaanada.
Tilmaamaha cusub ee loogu talogalay gobolka Stockholms län, bogga internetka ee Region Stockholm